Olee ka ihichapụ YouTube videos na ọwa s
Olee ka ihichapụ YouTube videos na ọwa
Part 1.How ka ihichapụ onye video si YouTube
Part 2.How ka ihichapụ a YouTube ọwa / YouTube akaụntụ
Part 3.Some Atụmatụ na usoro maka ihichapụ vidiyo si na YouTube na ndị ọzọ na video weebụsaịtị
YouTube bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu online ngwaọrụ nke taa. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị gara YouTube n'ihi na ihe ọhụrụ ozi ọma, music, nkiri trailers, akụkọ, na-amu amu E na-akpa ọchị videos wdg Gịnị na-eme YouTube mkpa ọbụna karị bụ eziokwu na ọ na-enye gị ike ịkọrọ gị oge n'ụdị videos.
Otú ọ dị, e nwere ike inwe mgbe ị chọrọ a video na ị mbụ uploaded ehichapụ. Ma eleghị anya, n'ihi na eziokwu na bulite e mere na-enweghị na-enye ọtụtụ nke a echiche na a eketịbe nke a oge ma ọ bụ na ị chọghị ochie video arahụ na-etinye ọhụrụ na emelitere otu n'ọnọdu-ya. E nwere nwekwara ndị mbipụta na nwebisiinka nke ahụ nwere ike ịmanye gị sere ala gị video ma ọ bụ mgbe ụfọdụ dum ọwa na YouTube. N'agbanyeghị ihe ndị mere bụ, anyị na-aga agwa gị otú ị hichapụ gị YouTube videos na ọwa na enyemaka nke nnọọ mfe nzọụkwụ.
Part 1 Olee ka ihichapụ onye video si YouTube
Ka anyị na-amalite na-amụta otú ka ihichapụ onye video on YouTube na-amalite. Ị ga-echeta na i nwere ike na ihichapụ ndị videos na ị uploaded onwe gị. Ozugbo ehichapụ, ọ dịghị onye ga-enwe ike ele ahụ video gị nke ọzọ. Ọzọkwa, n'oge a, i nwere ike na ihichapụ vidiyo site na iji YouTube ngwa na iOS na Android na nakwa dị ka egbu osisi na gị YouTube akaụntụ site na iji kọmpụta.
Nzọụkwụ 1. Abanye na YouTube wee mepee menu iji na-esonụ button si n'elu aka ekpe n'akụkụ akuku.
Nzọụkwụ 2. Gaa My ọwa> Videos ịhụ ndepụta nke videos uploaded site ị.
Nzọụkwụ 3. Ozugbo ị chọtara video ị chọrọ ehichapụ, pịa na nyere n'okpuru akara ngosi maka menu nyere ọzọ na video nkọwa.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ahụ, nanị pịa na 'Nhichapụ' bọtịnụ ma ọ bụ akara ngosi na ọ bụ ya.
Nzọụkwụ 1. Abanye na YouTube wee pịa ndị na-esonụ na akara ngosi ma ọ bụ bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3. Ozugbo ị chọtara video ị chọrọ ehichapụ, pịa na nyere n'okpuru akara ngosi maka menu na i kwesịrị ịchọta ọzọ na video de
Mgbe ahụ, họrọ nhọrọ nke 'Hichapụ' ka ihichapụ video ugbu a. te na video ugbu a.
Gaa a njikọ - http://www.youtube.com/my_videos na banye na gị na YouTube na akaụntụ.
Mark vidiyo ị ga-amasị ka ihichapụ, na-eji igbe nri na-esote ya. I nwekwara ike họrọ multiple video faịlụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Ugbu a, na-aga Omume na họrọ Hichapụ mezue usoro a.
Part 2 Olee ka ihichapụ a YouTube ọwa / YouTube akaụntụ
Ọ bụrụ na ị nwere YouTube ọwa, Ohere inweta bụ na ọ na-jikọọ gị Google+ profaịlụ. Ebe a bụ otú ị nwere ike ihichapụ gị ọwa na ikpe.
Pịa na a njikọ http://www.google.com/settings na mgbe ahụ banye na iji bọtịnụ na oké n'aka nri n'akụkụ ma ọ bụ dị ka na akara screenshot n'okpuru. Gbaa mbọ hụ na ị na-na ịbanye na iji otu akaụntụ na nwere gị YouTube ọwa.
Ugbu a, ozugbo ị na-ite na, pịa Akaụntụ Mmasị.
Ugbu a, peeji na-esonụ, gbadaa na nnọọ ala nke na peeji rue ị na-ahụ nhọrọ nke 'Hichapụ akaụntụ gị ma ọ bụ ọrụ'. Ozugbo ị chọtara ya, pịa ya.
Na-esonụ na ihuenyo, họrọ nhọrọ 'Hichapụ ngwaahịa' dị ka e nyere na screenshot.
Ugbu a, nnọọ pịa Nhichapụ icon esote 'YouTube' na ị na-eme. I akpatre ehichapụ dum YouTube ọwa nke gị.
Nkebi nke 3 Ụfọdụ Atụmatụ na usoro maka ihichapụ vidiyo si na YouTube na ndị ọzọ na video weebụsaịtị
Ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ vidiyo si na YouTube na ndị ọzọ na video saịtị, ị ga-kpọmkwem kpọtụrụ isi iyi. Ọtụtụ ugboro karịa ihe ọ bụla ọzọ ndị ọzọ nile video weebụsaịtị ga-a ụzọ ka ị nweta akaụntụ gị na ha na ihichapụ ahụ dị ka ị hụrụ bụ ikpe na YouTube.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ a video ehichapụ na-adịghị uploaded site na gị, mgbe ahụ ị ga-esi njikere na ihu ole na ole ndọghachi azụ tupu inwe ihe ị chọrọ. Ị na-ahụ, ndị a weebụsaịtị ga-adị mkpa a zuru ezu nkọwa nke mere ha ga-ala video. Ya mere, ị ga-abụ njikere na gị eziokwu tupu ị na-agakwuru ha.
Ọzọkwa, dị ka kwuru na mbụ, na-persistent dị ka i wee ghara n'ihi ozugbo. Ụzọ kasị mma ime nke a bụ inwe na aka a ngalaba na-emekọ dị otú ahụ mkpesa. Kpọtụrụ ha site email ma ọ bụ mgbe kọntaktị iche dị site ndị a weebụsaịtị. -Eme ka ị bụrụ na ị hụ na ị na-eme ya nke ọma.
I nwekwara ike-akọ iwu imebi ka nchegbu ọchịchị nọ n'ógbè gị ma ha na-achụso ihe a na ukwuu ịdị ngwa.
Ọ bụla ikpe, ndị mbụ na ndị kasị mkpa na-achị bụ iji hụ na ị na-elekọta na nkekọrịta ma ọ bụ na-ebugote gị videos na akpa ebe. A otutu mbipụta nwere ike isi gbochie otú a.
Top 10 free Video Capture Software 2015 n'ihi na WinMac
Olee otú ime Vine na Enweghị aka na iPhone na Android
Facebook video egwu? Ka Idozi ya.
Olee otú Play MKV on Samsung TV
Olee otú Mepụta 3D Flash Photo Gallery
> Resource> Video> Olee ka ihichapụ YouTube videos na ọwa